Andry Rajoelina Tsy maintsy hosamborina ?
Nandeha be ny resaka omaly antoandro manodidina ny tamin�ny 1 ora sy sasany fa nosamborina i Andry Rajoelina.
Nifamahofaho tanteraka ny resaka. Nisy nanaparitaka tamin'ny alalan'ny sms sy tao anaty facebook fa feno miaramila eny Ambatobe manakaiky ny fonenan'ny filohan'ny tetezamita teo aloha. Re avy eo fa teny Ambodivona i Andry Rajoelina ary nisy ny fotoana somary nampikoropaka azy ka nialany tao. Nialoha ity raharaha ity moa dia nisy ny fisamborana vehivavy iray 50 taona teny Mahamasina ny alahady lasa teo, izay voalaza fa akaiky an’i Kolonely Lylison sy Alain Ramaroson, izay samy mpanao politika akaikin-dRajoelina. Saika hikotrika asa fampihorohoroana sy ra mandriaka no voalaza fa antony nisamborana ilay vehivavy. Hampidirina ao anatin’izany raharaha izany ihany koa ve i Andry Rajoelina ?
Fomban’ny mpanao politika ihany koa anefa ny manomana toe-javatra mafana mba hampalaza azy ary mety hitombina ihany koa ny hoe ilay mpanao politika ihany na ny mpomba azy no mamorona vaovao mba hiverenana eo amin’ny tontolo politika amin’ny alalan’ny fanamarinana na fandisoana ny vaovao nivoaka. Fanaon’ny mpitondra ankehitriny ihany koa anefa ny misotasota sy mandranitra ary mamorona atsanga tsy aman’orana hanasoketana ny hafa ho anton’ny tsy fahaombiazana, ka ambara ho vokatry ny fanohintohinana ataon’ireo tsy mitovy hevitra amin’ny tena ny fitotonganan’ny firenena. Tsy misy aloha hatreto ny didy fampisamborana ofisialy an'i Andry Rajoelina raha araka ny fanamarinam-baovao natao saingy fantatra kosa fa tsy levon'ny vavonin'ireo manampahefana eto amintsika ny niverenany sy ny fikasany hitoetra maharitra eto Madagasikara, Andry Rajoelina rahateo dia hatry ny ela no efa nilaza fa amin'ny 2018 mifankahita.